TPCH 2022 Sii -wadashada Guddiga Daryeelka iyo Doorashooyinka Guddiga - Wadashaqeynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
by	Elaine MacPherson	/ Jimce, 06 Meey 2022	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
XIRFADAHA XARUNTA DARYEELKA XULASHADA IYO XULASHADA XULASHADA
Dhammaan codadka waa in la bixiyaa 11:59 PM ee Talaadada, MAY 17
Fadlan ka soo qayb gal Shirka Sannadlaha ah ee Golaha Guud ee Khamiista marka ay bilaabato codaynta lagu dooranayo hogaanka TPCH. Xubnaha Golaha Guud ee TPCH ee leh mudnaanta codaynta waxay xaq u leeyihiin inay u codeeyaan dhammaan kuraasta Guddiga iyo Guddiga ee bannaan.
Xaq ma u leeyahay inaan codeeyo doorashadan?
Hubi jadwalka hadda ee xubnaha Golaha Guud ee TPCH xuquuqaha codbixinta halkan.
Halkan ka soo dejiso guddiga iyo qalabka doorashada ee guddiga. Xirmadan waxaa ka mid ah:
Guudmar hannaanka doorashada iyo tilmaamaha codeynta
Liiska xubnaha hadda jira ee Golaha Guud ee TPCH oo leh mudnaanta codbixinta laga bilaabo Maajo 6, 2022
Liiska Xubnaha Guddiga CoC ee fadhiya
Roster of CoC Board iyo murashaxiinta guddiga
Liisaska Guddiga CoC iyo musharrixiinta Guddiga oo leh tilmaanta meelaha la rabo ee khibradda sida lagu qeexay Siyaasadda Hawlgelinta Dhismaha Guddiga TPCH iyo yoolalka kala duwanaanta muhiimka ah
Bayaanka musharraxa ee danaha iyo waxyaabaha ku xiran
Dulmarka ujeeddada Guddiga CoC iyo xilalka la soo koobay
Qalabka tixraaca Degdega ah ee lagu aqoonsanayo musharixiinta urur iyo hay'ad walba oo musharrax walba uu dalbaday
TILMAAMAHA COD BIXINTA
Codbixintu waxay ka dhici doontaa onlayn, laga bilaabo May 12. Halkan codkaaga ku dhiib.
Kaliya hal cod ayaa loo ridi karaa xubin kasta oo ka mid ah codbixiyaasha TPCH oo lagu aqoonsaday liiska xubinnimada. Codad badan oo ka socda isla hay'adda lama aqbali doono.
Waraaqaha codbixinta laguma dari karo codadka musharixiinta ka badan kuwa xaqa u leh doorashada hay'ad kasta oo cod bixinaysa. Codbixintu waxay muujineysaa tirada guud ee codadka loogu dari karo hay'ad kasta oo cod bixinaysa.
Qofna kama adeegi karo wax ka badan laba hayadood oo la soo xulay ee Sii wadista Daryeelka (Gudiga CoC + 1 Guddi, ama 2 Guddi).
Hay'ad ma lahaan karto wax ka badan laba wakiil oo fadhi ku leh hay'ad la soo doortay. Haddii hay'ad ay leedahay laba wakiil oo la soo doortay, wakiil kasta wuxuu lahaan doonaa hal cod dhammaan ficillada ay soo doortaan xubnaha la soo doortay.
Dhammaan waraaqaha cod bixinta waa in lagu dhiibaa online ugu dambayn 11:59pm Talaadada, Meey 17.
Waraaqaha daahida lama aqbali doono.
Laga bilaabo May 12, ku dhiib codkaaga halkan.